भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनको नारा बदल्दै कन्हैया « Sajilokhabar
भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनको नारा बदल्दै कन्हैया
बिश्वपुँजिवाद, दक्षिणपन्थ र सामाजिक फाँसिवादका विरुद्ध नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका पक्षमा भारतमा कन्हैया कुमारले जसरी मुद्दा उठाइरहेका छन्, धेरै युवालाई यसले आकर्षित गरेको छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा उनको उदय । जेएनयु छात्र संघमा अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स फेडेरेसनको तर्फबाट अध्यक्षमा निर्वाचित ।
मोदी सरकारका दक्षिणपन्थी नीतिहरुका विरुद्धमा उनको भाषण । देशद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार अनि तिहार जेल चलान । जेलबाट रिहाइपछि जेएनयु प्राङ्गणमा उनको नारा ‘हम लेके रहेंगे आजादी’ । भारतबाट हैन भारतभित्र बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भोकमरी र पुँजीवादबाट आजादी अर्थात् स्वतन्त्रता । यो नाराले पाएको व्यापकता, चर्चा र विवाद ।
एकपछि अर्को बौद्धिक बहसका मञ्चहरुमा उनको जबरजस्त उपस्थिति । र अहिले लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) को तर्फबाट विहार बेगुसराय क्षेत्रबाट उम्मेद्ववारी । राजनीतिप्रति चाख राख्ने जोकोहीका लागि ३२ वर्षीया कन्हैया कुमारको यो राजनीतिक यात्रा रोचक छ ।
कन्हैयाकुमारले उम्मेद्वारी दर्ताकै बेलाबाट विग कर्पोरेटको हैन आम जनताको सहयोगमा चुनाव लड्ने घोषणा गरे । परम्पराभन्दा फरक ढंगले चुनावी मैदानमा खडा भएका कन्हैयाको यो अभियान सामाजिक संजालमा पछ्याएर धित मरेन ।
हाम्रो सानो टोली उनको चुनावी अभियान अध्ययन र अवलोकन गर्न रातारात बेगुसराय पुग्यो । प्रत्यक्ष स्थलगत अवलोकनले भारतीय लोकतन्त्र र त्यसमा पनि भारतीय वामपन्थीहरु कसरी चुनाव लडिरहेका छन् ? नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिल्यो ।
अग्रजले हाँक्ने, युवा खट्ने
बिहान ७ बजे हामी पुग्दा, बिहाटस्थित कन्हैयाको घर युवाहरुले भरिएको थियो । कन्हैया भने केही साथीसँग ‘मर्निङ वाक प्रचार’मा निस्कीसकेका रहेछन् । यो समय कन्हैया घरदैलो र गाउँका मानिसहरुसँग कुराकानी गर्दा रहेछन् । करिब ८ बजे घरकै मेसमा तयार भएको खाजा (प्राय पुरी तरकारी) खाएर उनी पार्टीले निर्धारण गरेको रुटमा ‘रोड शो’ र चुनावी सभामा निस्किए ।
‘हम लेके रहेंगे आजादी’ लेखिएको र कन्हैयाले डम्फु (डफली) बजाउदै गरेको तस्बिर अंकित टीसर्ट लगाएका जोशिला युवाहरुले नारा लगाउँदै अगुवा पछुवा गाडी र मोटरसाइकलको लामो लर्को लगाए । अर्कोतिर, प्रचारका लागि दिल्ली, पटना र भारतका अन्य क्षेत्रबाट आएका सयौँ युवाहरु ५÷७ जनाको सानो सानो टोली बनाएर स्थानीयका साथमा मतदाताको घरआँगनमै पुग्दथे । घरदैलोको क्रममा उनीहरुको ध्याउन्न कुनै पनि घर नछुटोस् भन्ने देखिन्थ्यो । कसरी भोट गर्ने र कन्हैयालाई नै किन भोट गर्नुपर्ने भन्ने बुझाउँदै हिँडेकोे सक्रियता निकै आकर्षक देखिन्थ्यो ।
दिउँसो २ बजेतिर भाकपाको बेगुसराय जिल्ला कार्यालय पुग्दा त्यहाँ प्रौढ मानिसहरुको बाहुल्यता थियो । सहयोग र समर्थन गर्ने अन्य दलका नेताहरु पनि भाकपा कार्यालयमा जम्मा हुन्थे । कन्हैयाको प्रचार योजनाको प्रभावकारिता र थप मिहिनेत गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा गर्थे ।
पार्टीले विभिन्न क्षेत्रमा प्रचारको फ्लेक्स टाँगिएका, कन्हैया र उनको चुनाव चिन्हबारे स्पष्ट पार्ने गीतसंगीत सहितको प्रचार साधनहरुको जोहो गरेको थियो । यस्तो सबै संयोजन गर्ने प्रौढ नेताहरु नै देखिन्थे । नेताहरु विभिन्न ठाउँमा कन्हैयाको चुनावी अभियानको अपडेट लिदै थिए । कार्यालयमा एउटा ठुलो टेबल र केही कुर्र्सीहरु थिए ।
निर्वाचन परिचालनको जिम्मा पाएका प्रौढ नेताहरु पुरानै शैलीमा फोन नम्बर र अन्य सुचना कापीकलमकै भरमा संकलन गरिरहेका थिए । त्यहाँ कम्प्युटर, ल्यापटप वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको देखिएन । तर युवाहरुको भने प्राथमिकतामा थियो ‘न्यु मिडिया’ प्रचार ।
जीतको भोक दालमोठको खाजा
कार्यालयमा एकाएक मानिसको हातहातमा पोकाहरु बाँडिए । दालमोठको पोको रहेछ । दालमोठ चबाइरहेका सबैमा जीतको भोक टड्कारो देखिन्थ्यो । कोही आशावादी थिए, कोही भाजपाका प्रतिपष्र्धीले सय करोड खर्च गर्दैछन् रे, के घर घरमा बाँड्न सक्ला त? भन्दै प्रश्न गरिरहेका थिए । उनीहरुको चासो र ध्यानमा जीतको भोक निकै राम्ररी महसुस गर्न सकिन्थ्यो । पार्टी कार्यालयमा आउने अतिथीहरुको लागि मेस चलेको थियो । त्यहाँ सादा दाल भात तरकारीको व्यवस्था थियो ।
जीवित पार्टी आदर्श र प्रणाली
दिनभरको प्रचार कार्यक्रमपश्चात साँझ ७÷८ बजे कन्हैया सहित पार्टी निर्वाचन परिचालनको टिमको दैनिक समिक्षा तथा योजना तर्जुमा बैठकमा, केन्द्रीय नेताहरुको पनि आउने जाने चलिरहने रहेछ । सिपिआइका पाका नेता एवं पुर्व सांसद शत्रुधनप्रसाद सिंह त्यहाँ आइपुग्दा पार्टी कार्यालयमा रहेका सबै उभिए । यो कुरा सिंहले रुचाएनन् । उनको भनाइ थियो, तपाइँहरुलाई उठाउन म आएको हैन सघाउन आएको हुँ ।
सत्कार गर्नुहोस् तर कसैलाई ठुलो र आफुलाई सानो ठान्ने नगर्नुहोस् । हामी समानताका लागि लड्दैछौँ । सबै चुपचाप लागे । हामीलाई लाग्यो हामीकहाँ यसो बोल्ने नेताहरु निकै घटिसके । वास्तवमा यस्तो सोच्न पनि हामीले छाडेका पो छौँ कि ? त्यहाँका नेताहरुको सादापन साँच्चै अनुुकरणीय लाग्दथ्यो ।
लालसलाम, इन्क्लब जिन्दावादसँगै जयभिमको नारा
भाजपाको ‘मैँ भि चौकिदार’, कँग्रेस आइको ‘अब होगा न्याय’ भन्ने नारा देशव्यापी चलिरहँदा कन्हैयाको प्रचारमा ‘इन्क्लब जिन्दावाद’ गुञ्जिदैथ्यो । यो नारा भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी एवं सिपीआइका संस्थापकमध्ये एक, मौलाना हसरत मोहनीले सन् १९२१ मा रचेका थिए ।
भारतीय स्वतंत्रता संग्रामताका यो नारा चर्चित थियो । कन्हैयाको प्रचारमा बृद्ध र युवाले एकैसाथ यो नारा लगाएको सुन्दा, अश्फाक उल्ला खान, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, उनीहरुका क्रान्तिकारी साथीहरु र भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको याद दिलाईरहेको थियो ।
पटनाबाट चुनावी प्रचारमा आएको नागरिक समाजको ¥याली यस्तै नारा लगाउँदै बेगुसराय, अंबेड्कर पथमा रहेको अंबेड्करको शालिक नजिक पुग्यो । त्यहाँ नारा गुञ्जीयो, ‘जयजय भीम’, ‘तो जोर से बोलो जयभीम’, ‘तो मिलकर बोलो, जयभीम’ । ‘इन्क्लब जिन्दावाद’ सँगै ‘जयभिम’ र लालसलामको नारा पहिलोपटक एकैसाथ सुन्दा हामीलाई भने नौलो लागेको थियो ।
खोज्दै जाँदा भेटियो, जयभिमको नारा विशेषतः अंबेड्करवाद मान्ने बहुजन समाज पार्टी लगायतका नेताकार्यकर्ताले लगाउदा रहेछन् । तर सन् २०१६ जनवरीपश्चात ‘जयभिम’ र ‘लालसलामको’ नारा सँगसगै विद्यार्थीहरुले लगाए । कारण थियो, हैदरावाद विश्वविद्यालयमा पीएचडी अध्ययनरत रोहित वेमुलाको मृत्यु ।
जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा विश्वविद्यालयले कथित दलित भनिएका वेमुलाको छात्रवृत्ती रोकेको कारण, उनले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भनिन्छ । यस घटनापछि गरिब र कथित तल्लो जाति भनी गरिने सबैखाले विभेदविरुद्ध जेएनयु लगायत धेरै विश्वविद्यालयमा जयभिम र लालसलामको नारा एकसाथ लाग्न थाल्यो । विद्यार्थी आन्दोलनले सुरु गरेको यो नारा कम्युनिष्ट पार्टीका मञ्चमा पनि अनुसरण भए ।
कम्युनिस्टहरुको रातो रङ्ग र अंबेड्करको निलो रङ्ग मिलाएर ‘लाल–निल एकता, जिन्दावाद’ पनि सुरु भयो । विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका कन्हैया कुमार र उनका साथीहरुले बेगुसरायमा पनि यो नारालाई सर्वत्र बनाएका रहेछन् । जातीय र वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि ‘लालसलाम’, ‘जयभिम लालसलाम’मा रुपान्तरण भएको कन्हैयाका प्रचारमा लागेका कमरेडहरुले बताए ।
बेगुसरायमा जयभिम र लालसलाम मिश्रित नारा गरिब नागरिकको सामाजिक न्याय र मुक्तिका लागि सहयोगी होला वा नहोला, यो छुट्टै बहस हुन सक्ला । तर आज बेगुसरायमा एकसाथ गुञ्जीरहेको छ, लालसलाम, इन्क्लब जिन्दावाद र जयभीमको नारा ।
मुल एजेण्डाः संबैधानिक मुल्यको सुरक्षा
विशेषगरि भाजपा र मोदीले हिन्दुत्वको आवरणमा धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक प्रावधानमाथि हमला गर्न थालेको र यसले हिन्दु मुसलमानबीचको आपसी सद्भाव भड्काउन मद्दत गरेको भारतका सबै वामपन्थी पार्टीको ठहर छ ।
भारतीय संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि धावा बोल्दै भिडतन्त्र, अराजकता र उग्र राष्ट्रवादको आडमा सामाजिक फाँसिवादतर्फ धकेल्न भाजपा अग्रसर भएकाले आजका क्रान्तिकारीहरुको प्राथमिक कार्यभार चालु संविधानको रक्षा भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
सोही अनुसार बेगुसरायका जनतालाई कन्हैयाका लागि भोट मागिएको पर्चामा ‘जाती र धर्म को नाममा देश बाँड्नेहरुको षड्यन्त्रलाई असफल पार्दै, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ’ भन्ने अपिल छ ।
बेगुसरायमा प्रतिष्पर्धा त्रिकोणात्मक छ । भाजपाका गिरिराज सिंह, बहालवाला केन्द्रीय मन्त्री हुन् । गिरिराजले चुनावी प्रचारका क्रममा ‘मोदीका आलोचकका लागि भारतमा ठाउँ नभएको र उनीहरु पाकिस्तानपरस्थ भएको’ भन्दै भाजपा विरोधीको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न खडा गरे । उनले आफु सबै हिन्दुहरुको प्रतिनिधि बनेर चुनाव लडिरहेको अभिव्यक्ती दिंँदैछन् । अर्कोतिर लालुप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) समर्थित महागठबन्धनको उम्मेद्वार छन् तनवीर हसन । उनी मुसलमान समुदायका हुन् ।
विधायक निर्वाचित भइसकेका र पछिल्लो लोकसभा चुनावमा दोस्रो भएका व्यक्ति हुन् हसन । एकातिर महागठबन्धनको साथ, अर्काेतर्फ आफु मुसलमान समुदायको भएकोले यो पाली आफैले जित्ने दावी गरिरहेका छन् हसन । यी दुईका साथमा ठुला साना गरि करिब २७ वटा वामपन्थी पार्टीहरुको साझा उम्मेद्वार बनेका छन् कन्हैया कुमार । दिल्लीमा सरकार चलाइरहेको आम आदमी पार्टीको पनि उनलाई साथ छ ।
कन्हैयालाई जित्न भने सजिलो छैन
जेएनयुको विद्यार्थी राजनीति र मिडियाको बलमा नेता बनेकाले बेगुसरायमा जन्मेको भएतापनि कन्हैयालाई स्थानीय नेता भन्न नमिल्ने बिपक्षीको तर्क छ । सिर्फ एक सिटले केही गर्न सकिन्न त्यसैले सिपिआइका उम्मेद्वार कन्हैयालाई भोट दिनुको अर्थ छैन भनेर समेत प्रचार गरिँदैछ ।
भारतमा जातियताको मुद्दा पेचिलो छ । कट्टरपन्थीहरुको राजनीतिक पकड चुलीमा भएको हामीले देखेकै छौँ । कन्हैया भुमिहार हुन् जस्को मतसंख्या करिब साढे चार लाख छ । मुस्लिमको साढे दुई लाख, दलित को करिब एक लाख र यादवको असी हजार ।
अघिल्लो चुनावमा भाजपाका विजयी उम्मेद्वारले चार लाख अठ्ठाइस हजार, उनलाई पछ्याएका तनवीर हसनले करिब तीन लाख, उनन्सत्तरी हजार र सिपिआइका उम्मेद्वारले करिब एक लाख बयानब्बे हजार मत प्राप्त गरेका थिए । यही तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि उनले जीतका लागि करिब अढाइ लाख भोट बढाउनु पर्छ । यो सजिलो विषय भने छैन ।
कन्हैया आफु कुनै जाती विशेषको होइन आम जनताको भोटले जित्ने दावी गर्दैछन् । भाजपाका कतिपय समर्थकले चुनावी मेसीनमा हेरफेर गरेर भएपनि कन्हैयालाई हराउनुपर्ने बताएका छन् । उनले चुनावी अभियानका क्रममा पनि धेरै भौतिक अवरोध व्यहोर्नुप¥यो ।
यो सँगै उनले ख्यातिप्राप्त कलाकार, लेखक, पत्रकार र युवाहरुको जुन स्तरको साथ पाए सोही स्तरमा सिपिआइको स्थानीय कमिटी भने परिचालित नभएको गुनासो पनि आयो । कतिपय प्रौढ र स्थापित भनिएका नेताहरुमा उनको लोकप्रियताले चिडचिडाहट पैदा गराइदिएको पनि महसुुस गर्न सकिन्थ्यो ।
कम्युनिष्ट पुनरुत्थानको आशा
बिहारको ‘लेनिनग्राड’ अर्थात कम्युनिष्टहरुको बलियो भुमी मानिन्छ बेगुसराय । तर सन् १९६७ मा योगेश शर्माबाहेक सिपिआइका अन्य कुनै उम्मेद्वारले यहाँबाट लोकसभा चुनाव जितेनन् । भारतभर कुनैबेला महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने वामपन्थीहरुको अवस्था अहिले निकै कमजोर छ । संसदमा भारतीय स्वतन्त्रतापछि मुख्य विपक्षी दलको रुपमा क्रियाशील रहेको सिपिआइ क्रमशः विभाजित र कमजोर बन्दै गयो ।
क्षेत्रीय रुपमा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र केरेलामा लामो समय पकड जमाएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पछिल्लो २०१४ को लोकसभा चुनावमा ईतिहासमै सबैभन्दा कम ११ सिटमा खुम्चिनुप¥यो । आज यतिविघ्न कमजोर हुनुमा सिपीआइका ज्योति बसुलाई सन् १९९६मा तेस्रो मोर्चाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर वामपार्टीले सदुपयोग गर्न नसक्नु र पछिल्लोपटक २००८ मा एकिकृत प्रगतिशील गठबन्धनबाट वामपार्टी अलग हुनु मुख्य कारक रहेको कुरामा त्यहाँका वाम नेताकार्यकर्ताको ‘रियलाइजेशन’ पाइन्छ ।
बामपार्टीहरु निरन्तर विभाजित हुनु । समर्थन गरेका सरकारले लिएका कतिपय बाम नीतिहरुको स्वामित्व लिन नसक्दा, यसको जसबाट बञ्चित हुनु । यसले जनतासँग बढाएको दुरी । र अझ महत्वपूर्ण कुरा, कम्युनिष्ट पार्टीले नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उत्पादन नै गर्न नसक्नु । उत्पादन भएका कार्यकर्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनि नसक्नु ।
यस्ता विभिन्न कारणले सामाजिक रुपले खण्डित र वैचरिक ढंगले विभाजित भारतीय बामआन्दोलनमा आज कन्हैयाको उदय र चुनावी उम्मेद्वारीले केही आशा भने थपेको छ । यसको उदाहरण, देशभर सिपीआइएमले आरजेडीसँग गठबन्धन गरेपनि, बेगुसरायमा भने आफ्नो उमेद््वार तनवीर हसनलाई नभई कन्हैयालाई समर्थन गरेको छ ।
सिपिआइएमका महासचिव सिताराम यचुरीले बेगुसराय चुनावी सभामा मन्तव्य राखेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘भारत बचाउन र सकारात्मक परिवर्तनका लागि बामपन्थी उम्मेद्वार कन्हैयाको जीत महत्वपूर्ण छ’ ।
कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मात्र होइन, उनीहरुका भातृसंगठनका युवा विद्यार्थीहरु बेगुसरायको गाउँगाउँमा व्यस्त छन् । एकअर्कालाई संशोधनवादी वा उग्रपन्थी आरोप लगाइरहेकाहरुले एकताबद्ध भएर कन्हैयाको प्रचारमा जसरी जुटिरहेका छन्, त्यो साँच्चै लोभलाग्दो छ । यस क्रममा नयाँ पुस्ताले देखाएको जोश, सहभागीता र सक्रियतालाई वाम पार्टीहरुले आँफुलाई एकताबद्ध गर्न र फेरी बौराउन पहलकदमी गर्छ वा चुनावसँगै यो सकिन्छ ? त्यो यसै भन्न सकिन्न ।
माक्र्सले श्रमजीवि जनताको जीतका लागि तीन प्रमुख शर्त बताउँछन् । एक, श्रमजीवि वर्गको बहुसंख्या । दुई, उसलाई मुक्त गर्ने ज्ञान । र तीन, श्रमजीवि वर्गको संगठन । चुनावि प्रचारमा कन्हैयाले संगठनको विषयमा कम कुरा गरेका छन् ।
चुनावि जीतकोे तत्कालिन रणनीतिका लागि यसो गरिएको हो भने यसलाई ठिकै मान्न सकिएला । तर सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दाहरुलाई निश्कर्षमा पु¥याउन कन्हैया कुमार पौराणिक मिथकहरुमा पाइने एकल नायकी (इन्डीभिजुयल हिरोइज्म) को बाटोमा लाग्छन् वा कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत गर्ने, बृहत संगठन निर्माणको सारथी बन्छन् ? उनको छनौट भविष्यमा देखिने नै छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा संकट नआएको भए कन्हैयाको उम्मेद्वारी हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो त्यो अब अनुमानको विषय भयो । तर कन्हैयाको उम्मेद्वारी भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीको पुनरुत्थानको अवसर बन्छ वा बन्दैन, त्यो चाँही उनको छनौट र त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरु स्वयंको सुझबुझमा भर पर्नेछ ।
सिपाआइको केन्द्रले कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनरुत्थानको लागि कन्हैयाको जीतलाई ज्यादै ध्यान दिएको छ । यसमा उ सफल हुन्छ वा हुन्न त्यो बुझ्न भने मे २३, २०१९ पर्खनै पर्छ ।
मिडियामा एमसीसी र आस्था राउतको चर्चा..
नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्र्तगतको सहयोगका
एमसीसीले नेकपामा ल्याएको संकट
अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने मुद्दाले नेकपा ठूलो भूमरीमा
कसरी भयो नेपालमा इस्लाम महासभ्यताको बिकास ?
संसारमा विकसित मानव महासभ्यताहरूमध्ये इस्लाम सबैभन्दा कान्छो अर्थात् १५०० वर्षको इतिहास बोकेको सभ्यता हो ।
विश्वको पहिलो पत्रिका सन् १६०९ मा फ्रान्सबाट जर्मन भाषामा प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि जर्मन,